सर्वोत्तम सिमेन्टले लाभांश प्रस्तावसहित असार १० गतेका लागि बोलायो विशेष साधारण सभा
जेठ २६, काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडले असार १० गते विशेष साधारण सभा बोलाएको छ ।
काठमाडौंको तीनकुनेस्थित न्यौपाने टावरको तेस्रो तलाको हलमा विहान ११ बजे कम्पनीले सभा बोलाएको हो । कम्पनीले चुक्तापूँजी वृद्धि गरी संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरु बीचको पूँजीको अनुपात मिलान गर्न लागेको हो ।
हाल कायम चुक्तापूँजी रू. ३ अर्ब ४० करोडको आधारमा १९ दशमलव ११८ प्रतिशत बोनस शेयर र त्यसमा लाग्ने कर वापत १ प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गर्ने प्रस्ताव सभाका लागि कम्पनीले तय गरेको छ ।
कम्पनीको जेठ २५ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले विशेष साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कम्पनीले बुक विल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारणमा ६० लाख कित्ता आईपीओ विक्री गर्ने तयारी गरेको छ । गत माघ २ गते सम्पन्न दोस्रो वार्षिक साधारण सभाबाट कम्पनीले आईपीओ विक्रीको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
आईपीओ विक्रीका लागि कम्पनीले चैत ४ गते विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई नियुक्त गरेको थियो । त्यस्तै सहायक विक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल र एनआईबिएल एस क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ ।
कम्पनीले नेपालको धितोपत्रको इतिहासमै पहिलो पटक लागू भएको यस विधिबाट ६० लाख कित्ता आईपीओ सर्र्वसाधारणमा जारी गर्न लागेको हो । कुल कित्तामध्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २४ लाख कित्ता, उद्योग प्रभावित स्थानियका लागि ८ लाख कित्ता र कम्पनीका कर्मचारीसहित अन्य सर्वसाधारणमा २८ लाख कित्ता आईपीओ विक्री गर्ने कम्पनीले तयारी गरेको छ ।
कम्पनीको आईपीओ पश्चात रू. ४ अर्ब पुग्नेछ । आईपीओको अंकित मूल्य रू. १०० भएपनि बुक विल्डिङ विधिबाट संस्थागत लगानीकर्ताहरुको मूल्याङ्कनका आधारमा शेयरमूल्य तय हुनेछ ।
कम्पनीले आन्तरिक मूल्यांकन गर्दा प्रतिकित्ता रू. ७५० भन्दा बढी मूल्य कायम हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरेपछिनै नाफा कमाउँदै आएको र विगत तीन वर्षको औषत मुनाफा बार्षिक रू. १ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।